Umxholo oValiweyo okanye ongenasango: Nini? Ngoba? Njani ... | Martech Zone
Umxholo oValiweyo okanye ongenasango: Nini? Ngoba? Njani…
NgoMvulo, Juni 26, 2017 UMike Tirone
Ukufikelela kubaphulaphuli bakho ngokudibana nokuziphatha kwabo kwidijithali kuya kufikeleleka ngokwemvelo kwintengiso ekujoliswe kuyo kunye nemithombo yeendaba. Ukubeka uphawu lwakho kwindawo ephambili engqondweni yomthengi wakho, ukubanceda ukuba bazi ngakumbi ngebrand yakho kwaye ngethemba lokuba ukungena kuhambo lomthengi owaziwayo kunzima kakhulu. Kuthatha umxholo ohambelana neemfuno zabo kunye nezinto abanomdla kuzo, kwaye zinikezelwa kubo ngamaxesha afanelekileyo okuhambisa inkqubo.
Nangona kunjalo, umbuzo oqhubekayo ukubuzwa ngaba ufanele "ukufihla" ezinye zeziqulatho kubaphulaphuli bakho?
Kuxhomekeke kwiinjongo zeshishini lakho, ukufihla okanye "ukubamba" eminye imixholo yakho inokuba nefuthe elimangalisayo kwisiseko sokukhokelela, ukuqokelelwa kwedatha, ukwahlulwahlulwa, ukuthengiswa kwe-imeyile, kunye nokwenza umbono wexabiso okanye ubunkokeli bokucinga ngomxholo wakho.
Kutheni Umxholo weSango?
Ukuqulatha umxholo kunokuba sisixhobo esibaluleke kakhulu xa ujonge ukwakha amaphulo okondla kunye nokuqokelela ulwazi malunga nabaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo. Ingxaki eyenzekayo xa ujongana nomxholo omninzi kukuba awubandakanyi abaphulaphuli abanokubakho, ngakumbi ikakhulu ukukhangela abasebenzisi. Ukuba umxholo wakho ufikeleleka esidlangalaleni kwiwebhusayithi yakho-kodwa uvaliwe-elo sango linokuthintela abaphulaphuli ukuba bangalifumani okanye balibone. Isicwangciso sokuqulatha umxholo ngokulula kukukhuthaza abasebenzisi ukuba babonelele ngolwazi malunga nabo ngendlela yokufumana intlawulo.
Umngcipheko wokubamba umxholo ulula ngokulinganayo: ukubamba umxholo ongalunganga kunokubangela ukuba abaphulaphuli bakho bangazibandakanyi negama lakho.
Uhlalutya umxholo wokuHamba / ukungahambi?
Indlela yokuhlalutya ukuba yeyiphi imixholo efanelekileyo esangweni kwaye hayi isango inokuhlulwa ngokweendidi ezintathu:
Umbuzo woKhangelo lweVolumu
Ukujoliswa kweHyper, Umxholo olungileyo
Imibuzo yeNqanaba labaThengi:
Bakweliphi inqanaba kuhambo lomthengi?
Ngaba zi-top-of-the-funnel kwaye zifunda nje ngenkampani yakho?
Ngaba bayalazi uphawu lwakho?
Umxholo ovaliweyo usebenza ngokukuko ekukhuliseni nasekuqokeleleni idatha xa umthengi ephakathi kwesigaba sokuqwalaselwa kunye nokufunyanwa kuba bazimisele ngakumbi ukunika ulwazi lwabo ukufumana umxholo oxabisekileyo. Ngokwenza loo "ntambo yevelvet yentsimbi" yobubodwa, umsebenzisi kunokwenzeka ukuba abonelele ngolwazi oluthe kratya kumxholo "wepremiyamu", kodwa ukuba wonke umxholo ubanjelwe isango, uphulukana nefuthe ekujoliswe kulo.
Kukwabaluleke ngakumbi ukuba nesango elithile lokuqwalaselwa kunye nokufunyanwa komxholo kwinkampani yakho kuba unokujolisa abaphulaphuli babo ngcono kwaye ugcine abaphulaphuli bezibandakanya.
Imibuzo yoKhangelo loMbuzo:
Ngawaphi amagama aphambili ophando asetyenzisiweyo kulo mxholo?
Ngaba abantu bafuna la magama?
Ngaba sifuna abantu abakhangela la magama ukuba bafumane umxholo wethu okanye cha?
Ngaba abaphulaphuli bokukhangela ngabasebenzisi bethu ekujoliswe kubo?
Amacandelo emixholo enomxholo akhangela kwimixholo exabisekileyo ke ukuba awukholelwa ukuba abaphulaphuli bezinto eziphilayo baya kufumana ixabiso kumxholo wakho, ukuyisusa kukhangelo (ukuyibamba) kuya kwenza ngokulula oko. Owona mceli mngeni mkhulu xa uphendula le mibuzo kukumisela ukuba uyakuphoswa kukukhangela okuxabisekileyo ngokukhangela umxholo. Sebenzisa izixhobo kuGoogle Webmaster ukubona ukuba ngaba abaphulaphuli bafuna eyakho amagama aphambili kumxholo inkulu ngokwaneleyo. Ukuba abo baphandi ngabasebenzisi bakho ekujongwe kubo, cinga ukushiya umxholo ungathandelwanga.
Ukongeza, ngokumakisha umxholo ngokuchasene nenqanaba labo kuhambo lwabathengi, uyazivumela ukuba wakhe i-faneli yohambo olwenziwe ngokwezifiso. Umzekelo, ulwazi (umxholo we-top-of-the-funnel) umxholo unokubanzi ngokubanzi kwaye ujongane noluntu ngelixa usiya ezantsi kumnxeba womsebenzisi, okona kubaluleke kakhulu umxholo wabo. Njengayo nayiphi na into enexabiso, abantu bazimisele "ukunika / ukuhlawula" ngenxa yayo.
Imibuzo yesiqulatho esijolise kuHyper:
Ngaba lo mxholo ujolise ngokukodwa kwinkqubo, kwimveliso, kwimveliso, kubaphulaphuli, njl.
WNgaba uluntu ngokubanzi lunokufumanisa ukuba lo mxholo unomdla okanye ufanelekile?
Ngaba umxholo uchaze ngokwaneleyo okanye awucacanga?
Ukongeza kwimephu yomxholo kuhambo lwabathengi kunye nokuqonda ixabiso lokukhangela izinto eziphilayo, kukwakho nokuqwalaselwa kwengxaki osombulula umxholo wakho. Umxholo okhethekileyo ojongana nesidingo ngqo, umnqweno, indawo yeentlungu, icandelo lophando, njl. Kuphucula amathuba okuba abaphulaphuli baveze ulwazi lwabo. Olu lwazi lungasetyenziselwa ukwahlula abatyeleli besiza, ii-personas, kunye nokujonga ngokufanayo iiprofayili kwimikhankaso efanelekileyo eya kuthi kamva ixhaswe kwezinye iindlela zokuthengisa ezinje nge-imeyile, ukuthengisa izinto ezenzekelayo / ukukhulisa ukukhokela, okanye ukuhanjiswa kwentlalo.
Okokugqibela, ukugoba ngokuchasene nokungabi nawo umxholo kungasebenza ngokufanelekileyo kwindlela yeqhinga lefaneli. Ingcebiso eqhelekileyo iya kuba kukumakisha umxholo ngokufanelekileyo kunye nedilesi yeyiphi iziqwenga eziya kuthi zixabiswe njenge "premium" okanye hayi.
Ngexesha apho abasebenzisi bedijithali bahlala bechaphazeleka ngowona mxholo ubalulekileyo kubo, kubalulekile ukuba uqonde indlela yokubakhulisa ngokudibanisa ngobuchule umxholo ongaxutywanga nongafakwanga. Ukuphambanisa indlela abaziphethe ngayo yeyona nto iphambili kolo thintelo lokuqala, kodwa umxholo olungileyo, ngexesha elifanelekileyo, "ngexabiso" elifanelekileyo kumsebenzisi yinto eya kubagcina bebuya.
tags: uhambo lomxholouhambo lwabathengiisigaba sohambo lwabathengiUmxholo onesangoumxholo wesangokujoliswe kakhuluumbuzo wombuzo wokukhangelaUmxholo ekujoliswe kuwo
UMike yiQhinga eliPhezulu lokuThengisa ngeDijithali I-R2i. Unomdla omangalisayo ngomxholo; ukuyila, ukuyithengisa, ukuyidla, ukuyihlalutya kunye nokuyiphucula. Njengonxibelelwano lwendalo onesidanga sokubhala, iminyaka yokuba nenkampani yokufota kunye nokulutha kwilizwe lentengiso yedijithali, amava am kunye nezinto endizithandayo zidityaniswa kakuhle njengecebo lokuthengisa ledijithali ephezulu.